Socodka Virtual to End Hunger wuxuu bixiyaa fursad si wadajir ah loogu dabaaldego - Cunnooyinka ku socda wheels
Socdaalka Virtual Walk to End Hunger wuxuu bixiyaa fursad lagu wada damaashaado
Qoysas badan oo u baahan inay dib uga fikiraan qorshooyinka Thanksgiving-ka, Walk-ka Dhamaystirka Gaajada waxay siisaa fursad qoysaska iyo asxaabtu inay si wada jir ah ugu wada joogaan sababo wanaagsan. Badanaa waxaa lagu qabtaa Mall of America, Walk to End Hunger wuxuu isu keenaa reer Minnesota si ay u helaan madadaalo, munaasabad qoys saaxiibtinimo leh oo diiradda lagu saaray la dagaallanka gaajada ee Minnesota. Markii aad iska diiwaangeli sidii lacag uruurin adigoo metelaya Cuntada Lugaha, khidmadda diiwaangelintaada iyo wax kasta oo aad kor u qaaddo waxay ku taageertaa Cunnada Lugaha.
Sidee ayuu u egyahay socodka Virtual si loo joojiyo Gaajada?
Maaddaama aynaan wada joogi karin shaqsi ahaan, Socodka Aakhiritaanka Gaajada ayaa kugu soo noqonaysa gurigaaga! Barnaamijka Virtual Walk to End Hunger wuxuu bilaaban doonaa 10 subaxnimo subaxa Thanksgiving-ka waxaadna heli doontaa xiriiriye si aad u daawato markaad isdiiwaangalinayso.
Nuska saac ee ugu horeeya qoyska oo dhami wuu ku raaxeysan karaa wuxuuna soo bandhigi doonaa:
Fursad aad ku baran karto qaar ka mid ah cuntooyinka macaan ee Chef Mauricio Legorreta laga bilaabo Cantina Loredo.
Qosol badan martida loo yahay Dez oo ka socda Showga Subaxnimo ee KS95, waxaana gudaha garoonka ku martigelinaya T Mychael Rambo iyo Shanan Custer.
Abaal-marinno! Ku guuleystayaasha abaalmarinta waxaa si toos ah loogu dhawaaqi doonaa, guuleystayaashuna waxay xaq u leeyihiin oo keliya inay guuleystaan haddii ay la socdaan!
Nuska saac ee labaad waa carruurta. "Caruurta miiska", oo ah 30 daqiiqo oo barnaamij saaxiibtinimo cunug ah ayaa carruurtaada ku raaxeysan doona guriga iyagoo leh farshaxanno, muusig, qoob-ka-ciyaar iyo madadaalo! Waxaa marti ku ah Rachael Kroog oo ka tirsan Kid Power oo ay weheliso Rachael iyo saaxiibadeed Enzo iyo Luca, munaasabadda Kids Table ayaa ka muuqan doonta:
Qayb ka mid ah cunno karinta-cunno karinta by Master Chef Junior's Arianna Feygin
Mashruuc farsamo mahadcelin ah waxaad ku sameyn kartaa sahayda jikadaada Bilowga Farshaxanka
Qaar ka mid ah saaxiibbada xayawaanka qabow!
Marabtaa inaad bilow madax ka noqoto mashruuca farsamada miiska Kid? Raadi tilmaamaha Farshaxanka Bilowga halkan!
Maaddaama in badan oo naga mid ahi aynaan awoodin inaynu la kulanno qoys ballaadhan sannadkan, waxaan kugula talineynaa inaan meel fog ka wada daawano adeegsiga Zoom ama barnaamij kale oo wadahadal fiidiyoow ah.
Ku soo biir kooxda Cunnada kooxda Wheels adigoo gujinaya “Ku biir Kooxda” heerkulbeegga hoostiisa.
Markaad isdiiwaangasho ama tabarucaato, waxaa laguu soo diri doonaa tilmaamo ku saabsan sida loola socdo dhacdada.
Waxaan rajeyneynaa inaad nagula soo biiri kartid saacad xiiso leh oo aad dib ugu celiso deriskeena u baahan mahadnaqan!
Waad ku mahadsantahay Subaru oo Mareykan ah oo kafaala qaaday Cuntada Lugaha Lugta ee kaqeybgalka dhacdadan! Eeg sida aad Jacaylka ula qaybsan karto iyo taageer Cunnada Wheels marka aad iibsaneyso Subaru cusub.
Nofeembar 12, 2020